Cetilistat (282526-98-1) Orinasa mpamatsy mpamokatra
CMOAPI dia manana akora feno Cetilistat, ary manana rafitra fitantanana kalitao tanteraka. Nandalo ihany koa ny fanamarinana GMP sy DMF.
Cetilistat vovoka Base Information
anarana Cetilistat vovoka
Appearence Gray Powder
Molecular Weight 316.31 g / mol
Storage Temp Toby temperature
Inona ny Cetilistat?
Cetilistat (CAS no.282526-98-1) fantatra ihany koa amin'ny hoe ATL-962, ATL 962 na Citilistat dia fanafody voalaza ho fitsaboana ny hatavezina. Izy io dia ampiasaina amin'ny kaloria ambany, sakafo ambany tavy, ary fanatanjahan-tena mety hanampiana ny fihenan-danja.
Ny fanafody cetilistat anti-obesity dia amidy amin'ny anaran'ny marika isan-karazany ao anatin'izany Cetislim, Kilfat, Oblean, ary Checkwt.
Cetilistat dia benzoxazine, tsindrona lipase amin'ny gastrointestinal izay miasa amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fandevonan-kanina sy ny fihinana ny tavy fihinana.
Ahoana Cetilistat mitsabo matavy loatra?
Ny fiterahana dia iray amin'ireo olana fahita indrindra amin'ny fahasalamam-bahoaka manerantany. Izy io dia sarotra, maharitra ary koa aretina multifactor miavaka amin'ny fanangonana tavy / adipose tavy be loatra.
Ny fiterahana dia mifandray amin'ny aretina ara-pahasalamana toy ny diabeta karazana 2, fiakaran'ny tosidrà, hyperlipidemia, kolesterola avo, homamiadana sasany, ary aretim-po sasany toy ny lalan-dra sy aretim-po.
Ny habetsaky ny vatana amin'ny firenena maro dia nahatratra ny haben'ny valan'aretina ary noho izany dia ahiana ny fahasalamana manerantany.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fihenan'ny lanjany maharitra 5 ka hatramin'ny 10% amin'ny lanjan'ny vatanao voalohany dia mety hampihena be ny korontana metabolika mifandray amin'ny hatavezina.
Cetilistat dia heverina ho mpitsabo mpanohitra ny hatavezina. Ireo mpiasan'ny anti-obesity matetika dia mampitombo ny fandaniana angovo ka mampihena ny lanjany amin'ny alàlan'ny fifehezana ny neural sy metabolika.
Cetilistat dia vavahadin-tsolika aretin-koditra gastrointestinal izay mpanohitra mahomby amin'ny fanoherana ny hatavezina amin'ny fanadihadian'olombelona.
Miasa Cetilistat amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fandevonan-kanina sy ny fihinanana tavy ao anaty sakafo laninao. Rehefa tsy levona ny tavy dia esorina amin'ny diky mandritra ny fihetsehan'ny tsinay. Manantanteraka izany amin'ny alàlan'ny fanakanana ny lipase anzima tompon'andraikitra amin'ny famotehana triglycerides (tavy / lipid ao amin'ny vatana) ao amin'ny tsinay.
The effets cetilistat dia aseho ao amin'ny lalan'ny gastrointestinal. Midika izany fa ny cetilistat dia tsy mitovy amin'ireo mpiasan'ny anti-obesity hafa izay mitaona ny atidohanao hampihena ny fahazotoan-komana satria miasa manodidina izany.
Rehefa voasakana ny fandevonan-kanina sy ny fandraisana ny tavy fihinana, voafetra ny famoahana tavy ka ambany ny fandaniana angovo izay miteraka fihenan'ny lanja.
Na izany aza, ny Cetilistat dia hanampy anao hampihena ny lanjanao, eo aminao ny fihazonana sakafo mahavelona ambany-matavy miaraka amin'ny fampihetseham-batana ho an'ny fitantanana matavy loatra.
Ny cetilistat sy ny orlistat dia fanafody fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana ny hatavezina. Mampiseho fomba fiasa sahala amin'izany izy ireo amin'ny alalàn'izy ireo mampihena ny lanjany.
Ny Cetilistat sy ny orlistat dia vavan'ny vavonin'ny gastrointestinal izay manakana na mampihena ny fandevonan-kanina sy ny fandraisana ny tavy fihinana. Ny lipase dia tompon'andraikitra amin'ny famotehana triglycerides ao amin'ny tsinay. Ny tavy tsy miova dia esorina amin'ny alàlan'ny fivezivezin'ny tsinay ao anaty tain'olombelona. Ity hetsika ity dia miantoka fa ny menaka tsy tafiditra ao amin'ny vatana mitarika fihenan'ny lanja.
Ny fihenan'ny lanjany lehibe dia notaterina tamin'ny cetilistat sy orlistat. Ny fahombiazan'ny cetilistat vs orlistat dia miankina amin'ny fomba fiainanao satria mitaky anao hifikitra amin'ny sakafo mahavelona ambany kaloria miaraka amina fanatanjahan-tena matetika.
Ny Cetilistat ary koa ny orlistat dia mampiseho fanaraha-maso glycemika nohamafisina tamin'ny alàlan'ny fihenan'ny hemôglôbinin'ny glycosylated plasma. Izy ireo koa dia mampihena ny loza ateraky ny aretina mifandraika amin'ny hatavezina toy ny aretim-po, ny tosidra ambony, ny tahan'ny kolesterola avo, ary ny diabeta karazany 2
Ny vokatra mahazatra mahazatra mifandraika amin'ny cetilistat sy orlistat dia ny vokatry ny gastrointestinal mazàna noho ny tavy tsy miova. Na izany aza, rehefa mampitaha ny cetilistat vs orlistat amin'ny lafiny voka-dratsy ianao, dia misy vokany betsaka kokoa mifandray amin'ny orlistat noho ny amin'ny cetilistat. Ankoatr'izay, ny hamafin'ireo vokany dia miharihary kokoa amin'ny orlistat noho ny amin'ny cetilistat.
Rehefa mampitaha ny fandeferana an'ny cetilistat vs orlistat, ny cetilistat dia voalaza fa mahazaka tsara noho ny orlistat.
Ny fandinihana 12 herinandro izay nahitana marary be loatra tamin'ny diabeta karazana 2 dia natao hanombanana ny fihenan'ny lanja, ny fihenan'ny hemoglobinin'ny glycosylated, ary ny fandeferana ny cetilistat raha oharina amin'ny orlistat. Ny fitsaboana dia natambatra tamin'ny sakafo matavy ambany na antonony ary diabeta mellitus tantanana amin'ny fampiasana metformin.
Ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ny cetilistat sy ny orlistat dia nampihena be ny lanjany ary koa ny fanatsarana ny fifehezana glycemika. Ny zava-mahadomelina koa dia mampihena ny risika amin'ny aretim-po amin'ny alàlan'ny fampihenana ny manodidina ny andilana izay famantarana ny aretim-po.
Amin'ity fandinihana ity, ny voka-dratsiny voamarika dia ny vokatry ny gastrointestinal izay bebe kokoa amin'ny orlistat, ary koa ny hamafin'ny vokatra mifandraika amin'ny orlistat dia hita fa avo kokoa noho ny an'ny cetilistat. Ny fahasamihafana eo amin'ny vokatry ny cetilistat vs orlistat dia mety ho ny fahasamihafana eo amin'ny rafitra sy ny simika.
Ny fialana amin'ny fianarana dia vokatry ny voka-dratsiny ary betsaka kokoa tamin'ny orlistat noho ny tamin'ny cetilistat. Ankoatr'izay, ny cetilistat dia zaka kokoa noho ny orlistat.
Iza no afaka mampiasa Cetilistat?
Azonao atao ny mieritreritra ny mandray Cetilistat (282526-98-1) raha mila mihena ianao. Na izany aza, toy ny fanafody hafa, alao ny fitandremana ilaina rehefa mandray an'io fanafody io.
Cetilistat dia atolotra ho an'ny olona manana index body mass (BMI) izay avo kokoa noho ny 27. Tsara ihany koa ny mihinana cetilistat raha avo kokoa noho ny 27 ny BMI anao ary mijaly amin'ny toe-javatra mifandraika amin'ny hatavezina toy ny diabeta sy ny fiakaran'ny tosidranao ianao. Ny BMI dia mari-pamantarana ny tavy amin'ny vatana kajiana amin'ny fizarana ny lanjanao amin'ny kilao amin'ny toradroa amin'ny metatra.
Raha nisafidy ny hihinana cetilistat ianao dia aza hadino ny mandray ny fatra cetilistat voalaza ao amin'ny sakafonao. Ny fatra cetilistat voatondro dia raisina tsara amin'ny sakafo, mandritra ny adiny iray na hatramin'ny adiny iray aorian'ny fisakafoanao.
Ny fanafody cetilistat dia miseho amin'ny kapsily na amin'ny takelaka ho an'ny fitantanana am-bava amin'ny rano iray vera. Mety hahita vovoka cetilistat koa ianao. Ny fatra cetilistat sy ny faharetan'ny fitsaboana dia hofaritan'ny mpitsabo anao miankina amin'ny fepetra sy ny valiny voalohany amin'ny fanafody.
Famoahana lanja Cetilistat Ny tombony azo dia tsy voalaza ho an'ny ankizy, noho izany dia tsy tokony homenao ny ankizy izany. Izany dia indrindra amin'ny ankizy amin'ny fahamaotiana satria cetilistat dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboany bebe kokoa amin'ny haavony.
Cetilistat dia heverina ho tsy azo antoka ho an'ny reny bevohoka na vehivavy manandrana miteraka. Mety hampidi-doza ny zaza ao am-bohoka izany.
Ny reny mampinono dia anoroana ihany koa mba hisorohana ny cetilistat satria mety hitety ilay zaza.
Ny dokoteranao dia mety hanome torohevitra anao handray na hialana amin'ny cetilistat noho ny toe-pahasalamana efa nisy toa ny hypersensitivity, cholestasis (aretin'ny aty) ary ny syndrome malabsorption maharitra.
Ny voka-dratsin'ny Cetilistat
Ny vovo-dronono Cetilistat dia heverina ho azo antoka fa raha mihoatra ny doka cetilistat voalaza ianao na tsy manaraka ny torolalana dia miaina ny voka-dratsin'ny cetilistat. Ireo voka-dratsy ireo dia mety hitranga eo am-piandohana nefa malefaka ary tokony hiala miaraka amin'ny fampiasana fanafody hatrany. Raha tsy lasa izy ireo dia tokony hifandray amin'ny dokoteranao.
Ny voka-dratsin'ny cetilistat mahazatra indrindra dia;
Gas miaraka amin'ny fivoahana
Fihetsiketsehana maika sy matetika izay mety ho sarotra fehezina
Seza misy menaka na matavy
Ny voka-dratsin'ny cetilistat tsy fahita firy nefa matotra kokoa dia mety hitranga. Tokony manatona ny dokotera eo noho eo ianao rehefa mahatsikaritra ireto vokany ratsy manaraka ireto;
Jaundice (mavo ny maso na ny vatana iray manontolo)
Reraka tsy mahazatra
Fahasarotana mitelina na miaina.
Tombony ho an'ny fihenan'ny lanja Cetilistat amin'ny fitantanana matavy loatra no tena fampiasana azy. Misy tombony hafa ihany koa anefa ny cetilistat izay mampiavaka azy sy miavaka amin'ireo fanafody mampihena lanja hafa.
Ireto ambany ireto ny tombony azo avy amin'ny cetilistat;
Manampy anao hitazona fomba fiaina ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fihenan-danja
Cetilistat dia iray amin'ireo zava-mahadomelina mampihena ny lanjany ary koa mpiasan'ny anti-obesity. Amin'ny fiainanao ara-dalàna ny fahazoana lanja be loatra dia miteraka fitomboan'ny habeny sy tavy amin'ny vatana izay matetika antsoina hoe matavy loatra na matavy loatra. Ireo fepetra roa ireo dia mifandraika amin'ny olana ara-pahasalamana toy ny diabeta karazana 2, aretim-po toy ny lalan-dra, tosidra ambony, ary homamiadana sasany toy ny homamiadan'ny nono sy tratra.
Ny fanavahana ny olona matavy loatra sy ny matavy loatra dia ny index an'ny vatana (BMI). Ny olona iray dia heverina ho matavy loatra rehefa lehibe kokoa na mitovy amin'ny 25 ny BMI raha misy olona matavy loatra kosa manana BMI lehibe kokoa na mitovy amin'ny 30.
Ny fakana cetilistat dia hanampy ny vatanao hampihena ny fanangonana tavy ka hihazonana BMI mahasalama ary fomba fiaina salama. Izany dia satria mampihena ny vintana amin'ny toe-piainana mandrahona ny ainy mifandraika amin'ny hatavezina.
Manampy amin'ny fihenan-danja sy ny fihenan'ny hemoglobinin'ny glycosylated amin'ny mararin'ny diabeta marary
Ny diabeta sy ny diabeta karazana 2 izay antsoina koa hoe diabeta mellitus dia aretina mahazatra amin'ny marary marary. Ny diabeta karazana 2 dia mitranga rehefa manohitra ny vokatry ny insuline ny sela, izay mitarika ny glucose amin'ny ra ao anaty sela. Izany dia mitarika amin'ny fiangonan'ny glucose ao anaty ra. ny hatavezina dia fantatra fa mampiakatra be ny diabeta karazana 2.
Ny hemôglôbininà glycosylated (hemôglôbinina izay amatoran'ny glucose) dia refin'ny fanaraha-maso diabeta maharitra lava. Ny haavon'ny hemôglôbinin'ny glycosylated (HbA1c) dia mampiseho ny glucose glucose ao anatin'ny telo volana lasa. Ny haavon'ny hemôglôbinin'ny glycosylated normal dia 7% fa ny ankamaroan'ny olona voan'ny diabeta dia 9% ihany no azony.
Nandritra ny 12-herinandro, fandalinana klinika natao tamin'ny alàlan'ny fanaraha-maso placebo, ireo marary be loatra amin'ny diabeta karazana 2 dia nomena cetilistat (40, 80, na 120mg intelo isan'andro). Tokony hifikitra amin'ny sakafo hypocalorika ihany koa izy ireo. Ny Cetilistat dia hita fa mampihena be ny lanja ary koa mampihena ny hemôglôbininà glycosylated (HbA1c). Voamarika ihany koa fa ny cetilistat dia nandefitra tsara.
Cetilistat mahazaka tsara
Ankoatry ny fahombiazany amin'ny fampihenana ny lanja sy ny fitantanana matavy loatra, dia misy hafa ihany koa. Ny Cetilistat dia mahazaka tsara ao amin'ny vatana miaraka amin'ny voka-dratsiny maivana sy antonony izay azo fehezina ary mety hanjavona amin'ny fampiasana cetilistat mitohy.
Na dia mandeha amin'ny fahombiazan'ny fanafody aza ny ankamaroantsika, tsara ihany koa ny mitady fanafody azo zakaina amin'ny vatanao.
Ao amin'ny dingana 2 ny fianarana klinika dia natao nandritra ny 12 herinandro tamin'ny fampiasana ny cetilistat sy ny orlistat mahazatra. Ireo fanafody roa mampihena lanja ireo dia hita fa mahomby amin'ny fihenan'ny lanjany, mampihena ny hemôglôbininà glycosylated ary koa ny fampihenana ny fihodinan'ny valahana. Ary koa, ny cetilisat dia hita fa milefitra tsara noho ny orlistat, miaraka amin'ny voka-dratsy kely kokoa sy kely kokoa mifandraika amin'ny cetilistat.
Manampy anao hahatratra ny tanjonao ao anatin'ny fotoana fohy
Ny fihenan-danja dia tanjona fohy azo tratrarina amin'ny alàlan'ny fanovana sakafo sy miaraka amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka. Na izany aza, tanjona maharitra ny fitandroana lanja salama.
Ny dokoteranao dia mety hanome soso-kevitra amin'ny fanafody fampihenana lanja rehefa tsy mahatratra ny fihenan'ny lanjany ny fomba fiaina ara-pahasalamana (sakafo sy fanatanjahan-tena). Cetilistat dia iray amin'ireo fanafody izay azo ampiasaina miaraka amin'ny sakafo matavy ambany sy fanatanjahan-tena tsy tapaka. Tsy toy ny fanafody fanoherana ny hatavezina hafa izay maharitra fotoana lava hahatratrarana fihenam-bidy lehibe, cetilistat dia maharitra 12 herinandro mba hanomezana ny lanja tadiavina.
Mety hanampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny kolesterolao
Ny kôlesterôla dia manondro entona waxy. Takiana amin'ny vatanao ny manangana sela, na izany aza, mety be loatra ny olana amin'ny vatana.
Ny kôlesterôla dia avy amin'ny atiny raha ny sasany kosa avy amin'ny sakafo laninao toy ny hena, akoho amam-borona ary vokatra ronono feno tavy. Misy karazany 2 ny kolesterola. Kolesterola lipoprotein (LDL) ambany hakitroka na kolesterola "ratsy" sy lipoprotein avo lenta na kolesterola "tsara". Ny LDL dia mandray anjara amin'ny fananganana tavy amin'ny arterà ka mampitombo ny risika amin'ny aretim-po toy ny tapaka lalan-dra sy ny aretim-po.
Ny fiterahana dia mampitombo ny mety ho fatran'ny kolesterola avo anao. Ny fiterahana dia mampitombo ny habetsaky ny kolesterola LDL amin'ny fanovana ny valin'ny vatanao amin'ny tavy laninao. Ny fivontosana ateraky ny hatavezina dia mampihena ny valin'ny vatanao amin'ny fiovan'ny fihinanana tavy fihinana. Ho fanampin'izany, ny fanoherana ny insuline dia mahazatra ihany koa amin'ireo marary matavy loatra. Misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny tavy amin'ny vatanao koa izany.
Ny Cetilistat dia afaka mampihena ny kolesterola tanteraka ary koa ny kolesterola LDL.
Tao amin'ny fanadihadiana nisy raty, ny cetilistat notontosaina am-bava dia hita fa nanatsara ny hatavezina sy ny kolesterola tanteraka.
Mampihena ny loza ateraky ny aretim-po
Ny aretim-panafody dia aretina mitambatra amin'ny aretim-po na lalan-drà. Ny aretim-panafody dia misy aretin'ny lalan-drà toy ny aretim-po sy angina, tapaka lalan-dra, tsy fahombiazan'ny fo, ary aretim-po rheumatic ankoatry ny hafa.
Ny antony mahatonga ny aretim-po kardia dia miovaova arakaraka ny aretina manokana. Ohatra, ny aretin'ny lalan-drà sy ny lalan-drà ary ny aretin-kozatra dia azo vokatry ny fiakaran'ny tosi-dra, diabeta karazana 2, fifohana sigara, tsy fanatanjahan-tena, matavy loatra ary tsy fihinanan-tsakafo. Ny matavy dia tombanana ho 5% amin'ny aretim-po kardia.
Ny Cetilistat, noho izany, dia mampihena ny risika amin'ny aretim-po amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny hatavezina ary famporisihana ny sakafo ara-pahasalamana izay mitana andraikitra amin'ny fisorohana ny fisian'ny aretim-po.
Nandritra ny 12 herinandro, fandalinana an-tariby tsy nahitana olona mararin'ny diabetes diabeta, cetilistat dia natolotra tamin'ny 40, 80, na 120 mg intelo isan'andro. Ireo mpandray anjara dia nanoro hevitra ihany koa mba hitazona sakafo ambany tavy mandritra ny vanim-potoanan'ny fianarana.
Ity fanadihadiana ity dia nitatitra ny fihenan'ny lanjany lehibe ary koa ny fanatsarana ny fanaraha-maso glycemika. Ankoatr'izay, nisy fihenam-bidy lehibe teo amin'ny manodidina ny andilana izay iray amin'ireo tranga mety hampidi-doza amin'ny aretim-po kardia.
Mety hampidina ny tosidranao
Ny tosidra ambony izay antsoina koa hoe hypertension dia toe-javatra iray izay miakatra avo hatrany ny herin'ny rà manohitra ny rindrin'ny lalan-drà. Mampidi-doza ny fiakaran'ny tosidrà satria manery ny fo hiasa mafy izay mitarika amin'ny fanamafisana ny lalan-drà.
Ny fiakaran'ny tosidrà dia misy ifandraisany amin'ny aretina mandrahona aina toy ny lalan-dra, ny voa, ary ny aty amin'ny hafa.
Ny fahaverezan-tsakafo loatra na ny matavy loatra dia mampiakatra ny fahafahanao hanana tosidra. Mitombo ny tosidranao amin'ny fitomboan'ny lanja.
Midika izany, noho izany, fa ny fihenan'ny lanja dia iray amin'ireo fomba hampihenana ny tosidranao. Eto no misy ny cetilistat satria mitarika fihenam-bidy lehibe mandritra ny fotoana fohy.
Aiza no ahitako mividy Cetilistat?
Raha mieritreritra ny hampiasa cetilistat ianao dia mividy an-tserasera amin'ny fiononan'ny tranonao. Ny vovoka Cetilistat dia misy amin'ny Internet amin'ny mpamatsy cetilistat na mpanamboatra cetilistat fivarotana. CMOAPI dia iray amin'ireo mpanamboatra cetilistat izay mivarotra vokatra misy kalitao amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara.
Rehefa mividy vovoka cetilistat na kapsily cetilistat hafa avy any CMOAPI na mpamatsy cetilistat hafa manamarina tsara ireo marika momba ny fampiasana tsara ny zava-mahadomelina. Diniho ny fatra omena ny cetilistat araka ny torolalan'ny mpanamboatra cetilistat fa araho koa ny tolo-kevitry ny mpitsabo anao.
Reading hevitra cetilistat avy amin'ny zavatra niainanao manokana dia mety hanampy anao hahalala bebe kokoa ny fahombiazany ary koa ny fiarovana. Ny ankamaroan'ny mpanjifa ny cetilistat dia mividy an-tserasera ary mety mamela ny tsikera cetilistat mifototra amin'ny zavatra niainany manokana.
Vidiny Cetilistat dia fandinihana ihany koa rehefa te hividy azy ianao. CMOAPI dia iray amin'ireo mpamatsy cetilistat izay mety manolotra vidin'ny cetilistat mifaninana. Na izany aza, ny vidin'ny cetilistat dia tsy tokony hanajamba anao hisafidy vokatra ratsy kalitao.
Ny fividianana avy amin'ny fampiononana ao an-tranonao dia mety halaim-panahy hanao fividianana maika, na izany aza, mbola mila manamboatra fandaharana araka ny tokony ho izy ianao hahafantarana ny fisian'ireo fanafody tadiavinao mialoha.
Bryson, A., de la Motte, S., & Dunk, C. (2009). Fampihenana ny fidiran'ny tavy amin'ny sakafo amin'ny alàlan'ny tsindrona lipase vavon-tsiram-bidy gastrilissat amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo salama. Gazety britanika momba ny fivarotam-panafody klinika, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
Hainer V. (2014). Topimaso momba ny fanafody antiobesity vaovao. Hevitra momba ny pharmacotherapy, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P., Groot, G., Rissanen, A., Rossner, S., Toubro, S., Palmer, R., Hallam, R., Bryson, A., & Hickling, RI (2010). Ny fihenan-danja, ny fihenan'ny HbA1c, ary ny fandeferana ny cetilistat amin'ny fizahan-toetra tsy voafehy, placebo-dingana dingana 2 amin'ny diabeta be loatra: fampitahana amin'ny orlistat (Xenical). Matavy loatra (Spring Spring, Md.), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; Bryson, A; Hickling, R; Rissanen, A; Rossner, S; Toubro, S; Valensi, P (2007). "Cetilistat (ATL-962), mpanakan-doha lipase vaovao: Fandinihana 12-herinandro an-tsokosoko sy voafehy placebo amin'ny fampihenana ny lanjan'ny marary be loatra". Gazety iraisam-pirenena momba ny fiterahana. 31 (3): 494–9. doi: 10.1038 / sj.ijo.0803446. PMID 16953261.
Padwal, R (2008). "Cetilistat, mpanakana lipase vaovao amin'ny fitsaboana ny hatavezina". Hevitra ankehitriny momba ny zava-mahadomelina amin'ny famotopotorana. 9 (4): 414– PMID 18393108.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K (2008). "Cetilistat (ATL-962), mpanakana ny lipase pancreatic vaovao, dia manatsara ny fiakaran'ny lanjan'ny vatana ary manatsara ny mombamomba ny lipida amin'ny voalavo". Fikarohana hormonina sy metabolika. 40 (8): 539– doi: 10.1055 / s-2008-1076699. PMID 18500680. S2CID 29076657.